यी नेपाली फोटोग्राफरसँग विवाह गर्ने योजनामा छिन् अभिनेत्री श्रद्धा कपुर! :: Setopati
यी नेपाली फोटोग्राफरसँग विवाह गर्ने योजनामा छिन् अभिनेत्री श्रद्धा कपुर!
उनले श्रद्धासँग प्रेमसम्बन्ध रहेको कुरा भने अस्वीकार गरेका थिए। अभिनेता वरुण धवनले आफ्नो विवाहको फोटो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दा त्यसमा रोहनले वरुण र उनकी श्रीमती नताशालाई बधाइ दिएका थिए। रोहनको कमेन्टमा जवाफ फर्काउँदै वरुणले लेखेका थिए, ‘आशा गर्छु, अब तिमी पनि तयार छौं।’
वरुणको यस्तो जवाफले रोहन चाँडै विवाह गर्ने सुरसारमा रहेको संकेत गरेको छ। हाल श्रद्धा भने रणवीर कपुरसँग नयाँ फिल्म ‘लभ रन्जन’को तयारीमा छिन्। रोहनसँग विवाहको हल्लाबारे उनले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १३, २०७८, १४:३५:२३